ဗီလာကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှ ရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရတဲ့ သရဲနီတစ်ဦးအပေါ် ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ရီယိုဖာဒီနန် - Myanmar Man United.
ဗီလာကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှ ရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရတဲ့ သရဲနီတစ်ဦးအပေါ် ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ရီယိုဖာဒီနန်
KT | 13/01/2022 | News | No Comments
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ FA Cup ပွဲစဉ်အဖြစ် အက်စတွန် ဗီလာအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံကစားခဲ့ရာမှာ 1 –0ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်…ယင်းပွဲမှာ ရော်နယ်ဒို မပါလာပေမဲ့ နည်းပြကြီး ရန်းနက်စ်ဟာ သူ့ရဲ့ 4-2-2-2 ကစားကွက်ကိုဘဲအသုံးပြုခဲ့ပြီး ခံစစ်မှာ မက်ကွိင်းယားကိုနားခါ လင်ဒီလော့ နဲ့ ဗာရန်းအတွဲကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်…အဆိုပါပွဲစဉ်မှာယူနိုက်တတ်တို့၁-၀ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်တဆင့်တတ်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အက်စတန်ဗီလာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုအလူးအလဲကာကွယ်ခဲ့ရတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ကတော့ အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းအပေါ် အားမရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပထမပိုင်း ပွဲအစ (၈) မိနစ်မှာပဲ ဖရက်ဒ်ရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကနေ တွမ်မီနေးကခေါင်းတိုက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ဂိုးကြောင့်သာ ယူနိုက်တက်တို့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပါ။ဒုတိယပိုင်းမှာ ဗီလာက ယူနိုက်တက်ဂိုးပေါက်ကို ပိုမိုခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့သလို ဂိုးပေါက်ထဲ ၂ ကြိမ်တိုင် ထည့်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်၂ ကြိမ်စလုံး လူကျွံဘောအဖြစ်နဲ့ ဒိုင်လူကြီး မိုက်ကယ်အိုလီဗာကပယ်ချခဲ့တာကြောင့်သာ ယူနိုက်တက်တို့ ကံကောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲမှာ တပွဲလုံး လိုအပ်ချက်တွေ အမှားတွေများနေခဲ့တဲ့ ကစားသမားကို ဖာဒီနန်က ယခုလိုဘဲထောက်ပြ ဝေဖန်အပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်…
အက်ဖ်အေဖလား တတိယအဆင့်မှာ ဗီလာကိုအနိုင်ယူပြီး နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ ထိပ်ဆုံး ၄ သင်းအတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့ မန်ယူအနေနဲ့ လမ်း ကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ရတော့မယ်လို့ ဖာဒီနန်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖာဒီနန်က ” တပွဲလုံးခြေစွမ်းတွေက မတည်ငြိမ်နေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်….အသင်းသားအားလုံးက ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကစားပုံတော့သိပ်မတွေ့ရတောပါဘူး….ကွင်းလယ်မှာ ထိမ်းကျောင်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ ဖရက် နဲ့ တော်မီနေးအတွဲကိုဘဲ သည်းခံပြီးကြည့်နေရတယ်..ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့သူတို့အတွဲကမဆိုးပါဘူး….အဆိုးဆုံးကိုပြောပြမယ်….
ဆိုးရှားလက်ထက်တည်းက အမြင့်ဘောတွေကို မရှင်းထုတ်နိုင်လို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ လင်ဒီလော့ကို သုံးခဲ့တယ်…ဗာရန်းတယောက်တည်း ထိမ်းနေ၇တယ်…ဖရက်ဆီက ကျွံလာတဲ့ အလုံးတွေရောလင်ဒီလော့မထိမ်းနိုင်တဲ့ အမြင့်ဘောတွေကိုပါ ဗာရန်းက ထိမ်းနေရတယ်…နည်းပြအနေနဲ့ လင်ဒီလော့ကို ယခုလို အရေးကြီးပွဲတွေမှာ သုံးတာအရမ်း စွန့်စားရာကျနေပါတယ်….ဒီလိုပွဲမျိုးဆို အတွေ့အကြုံရင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ Come back ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖီးလ်ဂျုံးလ်ကို အသုံးပြုသင့်တယ် ” ဟု Sport Trible News မှာ ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်….
ဗီလာကိုအနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲစဥျမှ ရငျတမမနဲ့စောငျ့ကွညျ့နခေဲ့ရတဲ့ သရဲနီတဈဦးအပျေါ ထောကျပွလိုကျတဲ့ ရီယိုဖာဒီနနျ
မနျခကျြစတာယူနိကျတကျဟာ FA Cup ပှဲစဉျအဖွဈ အကျစတှနျ ဗီလာအသငျးကို အိမျကှငျးမှာ လကျခံကစားခဲ့ရာမှာ 1 –0ဖွငျ့ အနိုငျရခဲ့ပါတယျ…ယငျးပှဲမှာ ရျောနယျဒို မပါလာပမေဲ့ နညျးပွကွီး ရနျးနကျဈဟာ သူ့ရဲ့ 4-2-2-2 ကစားကှကျကိုဘဲအသုံးပွုခဲ့ပွီး ခံစဈမှာ မကျကှိငျးယားကိုနားခါ လငျဒီလော့ နဲ့ ဗာရနျးအတှဲကို အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ…အဆိုပါပှဲစဉျမှာယူနိုကျတတျတို့၁-၀ဂိုးနဲ့အနိုငျရရှိခဲ့ပွီးနောကျတဆငျ့တတျရောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့အကျစတနျဗီလာအသငျးရဲ့တိုကျစဈကိုအလူးအလဲကာကှယျခဲ့ရတဲ့ပှဲစဉျတဈပှဲလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ ကတော့ အသငျးရဲ့ခွစှေမျးအပျေါ အားမရဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။
ပထမပိုငျး ပှဲအစ (၈) မိနဈမှာပဲ ဖရကျဒျရဲ့ဖွတျတငျဘောကနေ တှမျမီနေးကခေါငျးတိုကျသှငျးပေးခဲ့တဲ့ ဂိုးကွောငျ့သာ ယူနိုကျတကျတို့အနိုငျရရှိသှားခဲ့တာပါ။ဒုတိယပိုငျးမှာ ဗီလာက ယူနိုကျတကျဂိုးပေါကျကို ပိုမိုခွိမျးခွောကျနိုငျခဲ့သလို ဂိုးပေါကျထဲ ၂ ကွိမျတိုငျ ထညျ့နိုငျခဲ့ပမေယျ့၂ ကွိမျစလုံး လူကြှံဘောအဖွဈနဲ့ ဒိုငျလူကွီး မိုကျကယျအိုလီဗာကပယျခခြဲ့တာကွောငျ့သာ ယူနိုကျတကျတို့ ကံကောငျးသှားခဲ့ရပါတယျ။ဒီပှဲမှာ တပှဲလုံး လိုအပျခကျြတှေ အမှားတှမြေားနခေဲ့တဲ့ ကစားသမားကို ဖာဒီနနျက ယခုလိုဘဲထောကျပွ ဝဖေနျအပွဈတငျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ…
အကျဖျအဖေလား တတိယအဆငျ့မှာ ဗီလာကိုအနိုငျယူပွီး နောကျတဈဆငျ့တကျရောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ ထိပျဆုံး ၄ သငျးအတှငျး ဝငျရောကျနိုငျဖို့အတှကျ ရုနျးကနျနရေတဲ့ မနျယူအနနေဲ့ လမျး ကွောငျးမှနျပျေါ ပွနျရောကျဖို့ဆိုရငျတော့ ပွတျပွတျသားသားလုပျရတော့မယျလို့ ဖာဒီနနျက ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ဖာဒီနနျက ” တပှဲလုံးခွစှေမျးတှကေ မတညျငွိမျနသေေးတာကိုတှရေ့ပါတယျ….အသငျးသားအားလုံးက ယုံကွညျမှုပြောကျဆုံးနတေဲ့ ကစားပုံတော့သိပျမတှရေ့တောပါဘူး….ကှငျးလယျမှာ ထိမျးကြောငျးနိုငျစှမျးမရှိတဲ့ ဖရကျ နဲ့ တျောမီနေးအတှဲကိုဘဲ သညျးခံပွီးကွညျ့နရေတယျ..ဒါပမေဲ့ ဒီနသေူ့တို့အတှဲကမဆိုးပါဘူး….အဆိုးဆုံးကိုပွောပွမယျ….
ဆိုးရှားလကျထကျတညျးက အမွငျ့ဘောတှကေို မရှငျးထုတျနိုငျလို့ ဝဖေနျခံနရေတဲ့ လငျဒီလော့ကို သုံးခဲ့တယျ…ဗာရနျးတယောကျတညျး ထိမျးနေ၇တယျ…ဖရကျဆီက ကြှံလာတဲ့ အလုံးတှရေောလငျဒီလော့မထိမျးနိုငျတဲ့ အမွငျ့ဘောတှကေိုပါ ဗာရနျးက ထိမျးနရေတယျ…နညျးပွအနနေဲ့ လငျဒီလော့ကို ယခုလို အရေးကွီးပှဲတှမှော သုံးတာအရမျး စှနျ့စားရာကနြပေါတယျ….ဒီလိုပှဲမြိုးဆို အတှအေ့ကွုံရငျ့ပွီးသားဖွဈတဲ့ Come back ဖွဈခဲ့တဲ့ ဖီးလျဂြုံးလျကို အသုံးပွုသငျ့တယျ ” ဟု Sport Trible News မှာ ဝဖေနျသှားခဲ့ပါတယျ….
မနေချင်ရင်သွား မတားဘူး ၊ အသင်းထက်ကြီးမားတဲ့ကစားသမားမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ ရန်းဂ်နစ်
ရန်သူတော်ဟောင်းကြီးဆီမြွန်နီနှင့်ပြန်ဆုံရတော့မယ့် သရဲနီ စီရော်နယ်ဒို
ကာဗာနီ ၊ရော်နယ်ဒို နှစ်ယောက်ပေါင်း လောင်းကျော်သွားတော့မယ့် သရဲနီတိုက်စစ်
ဆန်ချို၊လုခ်ရှောနဲ့ ရက်ရ်ှဖို့တို့ကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်းကိုလာချင်နေတဲ့ ဒီကလန်ရိုက်စ်